Hiran State - News: HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo ka soo horjeesday qodobadii ka soo baxay shirkii Garoowe.
HS:-Mudanayaasha baarlamaanka oo ka soo horjeesday qodobadii ka soo baxay shirkii Garoowe.
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka kumeel gaarka oo hogaaminaya inta badan mudanayaasha ugu badan baarlamaanka dhawaana xilkii ka qaaday gudoomiyahii hore xildhibaan Shariif Hasan Shiikh Aden ayaa ku tilmaamay qodobadii laga soo saaray shirkii Garoowe mid aan dhaqan galeyn.
Dhinaca kale waxaa siweyn looga dareemayaa magaalada Mogdisho dhaq dhaqaaq siyaasdeed kii ugu weynaa iyadoo ay inta badan mudanayaashu isku diyaarinayaan sidii ay u dooran lahaayeen afhayeen cusub oo uu yeesho baarlamanka mudada ka harsan xiliga kumeel gaarka ah amaba inta ka horeysa bisha todobaad ee sanadka danbe xiligaasi oo ay dalka la wareegayaan wajiyo cusub.
Si kastaba go,aanadii ka soo baxay shirkii Garoowe waxey u baahan yahiin in laga ansaxiyo amaba la horkeeyo baarlamaanka si ay u noqdaan meel mar waa hadii uu jiro dastuur lagu dhaqmo ayuu yiri mid ka mid ah mudanayasha ka soo horjeeda go,aanadii ka soo baxay shirkii Garoowe.
· admin on December 25 2011 12:01:17 · 0 Comments · 1535 Reads ·
14,637,896 unique visits